१९० बर्षको कछुवा, यही नै हो “देख्दा मात्र गुड लक हुने” अहिलेसम्मको सबैभन्दा जेठो जिवित जीव ! – Khabar Patrika Np
१९० बर्षको कछुवा, यही नै हो “देख्दा मात्र गुड लक हुने” अहिलेसम्मको सबैभन्दा जेठो जिवित जीव !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २९, २०७८ समय: १८:३९:५२
काठमाडौ : कछुवालाई भाग्यको प्रतिक मानिन्छ । बिहान उठ्नासाथ कछुवा देख्न पाईयो भने त्यो दिन पूर्ण रुपमा सफल हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।त्यही भाग्यको प्रतिक कछुवा मात्र यस्तो प्राणी हो विश्वमा सबैभन्दा धेरै आयु भएको जनवार नै यही हो ।
अहिले हामीले यहाँ पोष्ट गरेको कछुवा १ सय ९० बर्षको भयो ।यो कछुवा सन् १९३२ मा जन्मेको हो । तत्कालिन रानी भिक्टोरियाको राज्याभिषेकको ठिक ५ बर्ष अगाडी जन्मिएको कछुवाको नाम हो जोनाथन टोर्टोइज । यसलाई आजसम्मकै सबैभन्दा पुरानो जीवित भूमि जन्तु (जनावर) भनेर चिनिन्छ ।
कछुवा-कछुवा जल र स्थल दुईटै ठाँउमा बस्न सक्ने एउटा उभयचर जीव हो। प्रकृतिको सर्वाधिक पुरानो जीवधारी कछुवा सरिसृप वर्गमा सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी पनि मानिन्छ। बितेका २० करोड वर्षमा जलवायु परिवर्तन का वाबजुद अहिलेसम्म पनि आफूलाई सुरक्षित राख्दै आएको छ|
उभयचर प्राणीमा पर्ने कछुवा निकै लामो समय सम्म बाँच्ने प्राणी हो। सम्भवतः प्रकृतिमा मानिसको भन्दा दोब्बर आयु अर्थात् डेढ सय वर्षसम्म बाँच्न सक्ने प्राणी कछुवा बाहेक अर्को छैन र झण्डै २० करोड वर्षदेखि प्रकृतिको अनगिन्ती
आरोह अवरोहलाई झेल्दै आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल प्राणीमा पनि कछुवा नै पर्दछन्। कछुवाको प्रकार तथा पाइने स्थान-कैयौँ देश र द्वीपमा कछुवा पाइन्छ। ती मध्ये कतिपयमा विशेष किसिमको रङ्ग, खुवी, विशेषता र गन्ध हुने गरेको पनि पाइएको छ। अमेरिकामा एउटा यस्तो किसिमको कछुवा पाइन्छ जसलाई दुर्गन्धको भाँडो नै भनिन्छ।
उनीहरू अलिकति खतराको सङ्केत पाउने वित्तिकै शरीरबाट पसिनाले भिजेको मोजाबाट आउनेभन्दा पनि यति बढी कडा दुर्गन्ध छोडछन् कि शत्रुहरू त्यतैबाट भाग्न बाध्य हुन्छन्। कछुवा सिधासादा र केही पनि नगर्ने खालका हुन्छन् तर उनीहरूमध्ये केही प्रजातिका कछुवा यति ख’तरना’क प’नि पाइएका छन् कि ज्या’नै लि’ने ग’री ह’म’ला ग’र्न’ पनि बेर लगाउँदैनन्।
हुनत कछुवाको दाँत हुँदैनन् तर यसको ओठ जस्तो चुचोको भित्री भागमा आ’रो जस्तो दाना हुने गर्दछ जसले गर्दा समुद्रमा पाइने एक किसिमको घडियाली कछुवा निकै घा’त’क हु’ने गर्दछन्। यसैगरी अर्को एक विशेष प्रजातिको कछुवा अफ्रिकी मुलुकमा पाइन्छ।
चेप्टो आकृतिका देखिने यी कछुवा अलिकति ख’तराको सङ्केत पाउनासाथ शारीरिक संरचनाको फाइदा लिएर चट्टानको सानो प्वालबाट भित्र छिर्छन् र आफूलाई सुरक्षित गर्दछन्। उनीहरूलाई शत्रु जीवले पहिले त देख्नै सक्दैनन् देखिहाले पनि उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई यसरी फुलाउँछन् कि उसले बाहिर तान्नै सक्दैन।
यद्यपि संसारमा निकै प्रजातिका कछुवा पाइन्छन्। तथापि प्राणीशास्त्रीहरूले यिनीहरूलाई मुख्यतः तीन भागमा बाँडेर अध्यायन गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसमध्ये पहिलोमा समुद्री -टर्टल) कछुवा पर्छ भने दोस्रोमा मीठो पानीमा पाइने कछुवा -टेरापिन) र तेस्रो जमीनमा पाइने कछुवा -टारटायस) पर्दछ। कछुवाको शरीरको बाहिरी भाग निकै कडा हुन्छ।
सितिमीति उनीहरूमाथि अरू श’त्रुजीवले आ’क्रम’ण ग’र्न सक्दैनन्। तथापि प्रकृतिको पर्यावरणीयचक्रबाट उनीहरू पनि अछुत भने छैनन्। सिधै आ’क्रम’ण ‘ग’र्न न’स’के प’नि बाज तथा गि,द्धजस्ता हिं’स्र’क प’क्षी’हरूले उ’नीहरूलाई टिपेर आकाशमा लान्छन् च’ट्टानमाथि ख’साउने ग’र्दछन्।